6 Zvino Jobho akapindura, akati: 2 “Haiwa, kudai kutambudzika+ kwangu kwaiyerwa,Uye panguva iyoyo kudai vaizoisa nhamo yangu pachikero! 3 Nokuti zvino zviri kurema kupfuura jecha romumakungwa.Ndokusaka mashoko angu anga ari okuvhurumuka.+ 4 Nokuti miseve yoWemasimbaose ineni,+Iyo ine uturu huri kunwiwa nesimba rangu;+Kuvhundutsa kunobva kuna Mwari kwagadzirira kundirwisa.+ 5 Mbizi+ ingachema iri pane uswa here,Kana kuti nzombe ingakuma iri pane zvokudya zvayo here? 6 Zvinhu zvisinganaki zvingadyiwa zvisina munyu here,Kana kuti muto wakakorera womuti unonzi mumashimaro unombonaka here? 7 Mweya wangu waramba kubata chero chinhu chipi zvacho.Zvakafanana nehosha iri muzvokudya zvangu. 8 Haiwa, kudai chikumbiro changu chaizosvikaUye Mwari aizondipa tariro yangu! 9 Kudai Mwari aizongondipwanya hake,Kudai aizobvisa ruoko rwake ondiparadza!+ 10 Kunyange izvozvo zvaizongondinyaradza;Ndaizokwakuka nokufara+ pasinei nokurwadziwa kwazvo,Kunyange zvazvo aisazondinzwira tsitsi, nokuti handina kuvanza mashoko+ oMutsvene.+ 11 Simba rangu chii, kuti ndirambe ndakamirira?+Uye mugumo wangu chii, kuti ndirambe ndichirebesa mweya wangu? 12 Simba rangu rakafanana nesimba rematombo here?Kana kuti nyama yangu ndeyemhangura here? 13 Handichagoni kuzvibatsira here,Uye basa rinobudirira radzingwa pandiri here? 14 Ani naani anorega kuitira wokwake mutsa worudo,+Acharegawo kutya Wemasimbaose.+ 15 Hama dzangu dzakanyengera,+ sorukova rwomuchando,Somunoyerera namo hova dzomuchando dzinokurumidza kuoma. 16 Dzasviba nemvura yakaita chando,Chando chinovanda madziri. 17 Mumwaka wakakodzera dzinoshayiwa mvura,+ dzinoitwa kuti dzinyarare;Kana kwopisa dzinooma panzvimbo dzadzo.+ 18 Makwara enzira dzadzo anotsauswa;Dzinopinda munzvimbo isina chinhu dzoparara. 19 Boka revafambi vokuTema+ ratarira,Boka revafambi vaSebhiya+ rakadzimirira. 20 Vanyara nokuti vanga vava nechivimbo;Vasvika kunzvimbo yacho uye vaodzwa mwoyo.+ 21 Nokuti zvino imi hamusi chinhu;+Munoona chinovhundutsa, motya.+ 22 Ndamboti here, ‘Ndipei chimwe chinhu,Kana kuti ndibatsirei nechipo chinobva pane rimwe simba renyu; 23 Uye mundinunure paruoko rwemhandu,+Uye ndidzikinurei paruoko rwevadzvinyiriri’?+ 24 Ndirayiridzei, uye ini ndichange ndakanyarara;+Itai kuti ndinzwisise kukanganisa kwandakaita.+ 25 Mashoko akarurama—haiwa ave asingarwadzi zvakadini!+Asi kutsiura kwenyu kunotsiura chii?+ 26 Muri kuronga kutsiura mashoko here,Iwo mashoko omunhu akaora mwoyo+ zvaanongova okuti atorwe nemhepo?+ 27 Muchakandira nherera+ mijenya,Motengesa shamwari yenyu zvikuru sei!+ 28 Zvino chinditeererai,Muone kana ndichizoreva nhema+ pamberi penyu. 29 Ndapota fungaizve zvakanaka—musaita kuti kusarurama kuvepo—Chokwadi, fungaizve zvakanaka—kururama kwangu kuchiripo.+ 30 Parurimi rwangu pane kusarurama here,Kana kuti mukanwa mangu hamunzwisisi nhamo here?